ဒူဒူကြီး: Crane တွေအကြောင်းပြောကျမယ် - Overhead hoist crane
Crane တွေအကြောင်းပြောကျမယ် ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဒူဒူ ရေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ် http://www.myanmarengineer.org မှ၊ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။
သဘေ်ာစက်ခန်းမှာတတ်ဆင်ထားလေ့ရှိတဲ့ Overhead hoist crane အများစုကို၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား
နဲ့ မောင်းနှင်ပါတယ်။ overhead crane တလက်မှာ traveling base, end carriage, top girder နဲ့ hoist & trolley arrangement ဆိုပြီးအစိတ် အပိုင်း (၄) မျိုးပါဝင်ပါသတဲ့။ traveling base ဆိုတာကတော့ traveling rack (၂) ခု တတ်ဆင်ထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ end carriage ဟာ traveling base အပေါါမှာ တတ်ဆင်ထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ top girder ကို traveling base တလျှောက် သယ်ဆောင်ရွှေ့လျှားပါတယ်။ traveling base ပေါါမှာ longitudinally movement ရွှေ့လျှားစေဖို့ rollers တွေကို တတ်ထားပြီး geared motor နဲ့ မောင်းနှင်ပါတယ်။
Fig. overhead hoist crane arrangement - single girder
top girderပေါါမှာတော့ hoist & trolley arrangement ကိုတတ်ဆင်ထားပြီး၊ side movement အနေနဲ့ ရွှေ့လျှားစေပါ တယ်။ hoist & trolley arrangement ကတော့ hoisting motor နဲ့ chain hook အတွက် gear assembly တွေဖြစ်ပြီး၊ drive arrangement လည်းပါဝင်ပါတယ်။ hoist & trolley arrangement ကတော့ hoisting motor နဲ့ chain hook အတွက် gear assembly တွေ ဖြစ်ပြီး၊ drive arrangement လည်းပါဝင်ပါတယ်။ overhead crane တလက်ဟာ longitudinal travel motion နဲ့ long travel motion ဆိုတဲ့ motion (၂) မျိုးနဲ့ ရွှေ့လျှားပါသတဲ့။
Fig. overhead hoist crane - double girder
overhaed hoist crane တွေကို single gider overhead crane နဲ့ double gider overhead crane ဆိုပြီး (၂) မျိုးခွဲခြားနိုင် ပါတယ်။ double gider over head crane တွေမှာ end carriage ပေါါမှာ gearded motor ကိုတတ်ဆင်ထားပြီး၊ traveling base ပေါါမှာ long travel motion နဲ့ရွှေ့လျှားစေပါသတဲ့။ traveling base ရဲ့ ဟိုဖက်ထိပ်နဲ့ ဒီဖက်ထိပ်အဆုံး (၂) ဖက်မှာတော့ limit switch ကိုတတ်ဆင်ထားပြီး၊ end carriage ဟာ limit switch ကိုသွားထိတဲ့အခါ၊ geared motor ကိုအလိုအလျှောက်ရပ်စေပါတယ်။
Fig. hoist motor forward/ reverse starter
longitudinal travel motion နဲ့ double gider ပေါါမှာ host trolley ရွှေ့လျှားစေဖို့အတွက်လည်း geared motor ကိုတတ်ဆင် ထားပါသတဲ့။ long travel motion motor, longitudinal travel motion motor နဲ့ hoist motor တို့ရဲ့ starter တွေဟာ forward/ reverse starter တွေဖြစ်ကြပါတယ်။
hoisting motor တွေဟာ forward/ reverse လည်ပတ်သလို electro-magnetic brake တွေကိုတတ်ဆင် အသုံးပြုကြပါသတဲ့။ hoist motor တွေရဲ့ speed ဟာ variable speed ဖြစ်ပြီး pole changing starter တွေကိုအသုံးပြုသလို တချို့ hoist motor တွေမှာတော့ gear mechanism တွေကိုအသုံးပြုပြီး speed ကိုအတိုးအလျှော့လုပ်ပါတယ်။ hoisting မှာ rope slack နဲ့ over load protection အတွက်၊ safety switch တွေကိုလည်းတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ hoisting up နဲ့ hoisting down ဆိုတဲ့ "ဝန်" ကို "မ" တင်စဉ်နဲ့ အောက်ကို ပြန်ချစဉ်တွေမှာ wrapping drum ထဲမှာ wire rope ကြိုးချော်သွားတဲ့အခါနဲ့ သတ်မှတ်ထား တဲ့ အလေးချိန် ထက်ပို "မ" မိတဲ့အခါတွေမှာ safety switches တွေမှတဆင့် hoisting motor ကို trip ဖြစ်စေပါတယ်။
တချို့ hoisting unit တွေမှာ rope slack နဲ့ over load protection အပြင်၊ "ဝန်" ကို "မ" တင်ရင်း hook block ဟာတပါတည်း အပေါါကိုတက်လာတာမို့ gider နဲ့ မရိုက်မိစေဖို့ hook block limit protection ကိုပါတတ်ဆင်ထားတတ်ပါသတဲ့။ တခါတရံ မှာတော့ rope slack, over load နဲ့ hook block limit safety protection ဟာ hoisting motor ကို trip ဖြစ်စေရုံမက၊ overhead hoist crane တခုလုံးရဲ့ main breaker ကိုပါ trip ဖြစ်စေရန် shut trip circuit အနေနဲ့ တတ်ဆင်ထားတတ်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။
Fig. traveling base cross section
travelling base ဟာ overhaed hoist crane တလက်အတွက်အရေးကြီးပါသတဲ့။ end carriage မှာ stability နဲ့ radigity ပိုကောင်းစေဖို့ cross section အနေနဲ့ အောက်ခြေကျယ်ပြီး၊ သိပ်မမြင့်တဲ့ rail မျိုး ကိုရွေးချယ်တတ်ဆင်ကြပြီး sectional inertia ဟာလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်လို့ဆိုပါတယ်။
အပေါါမှာ load ပေါါမူတည်ပြီး traveling base ရွေးချယ်တဲ့ ဇယားလေးကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
အလားတူ lonitudinal motion နဲ့ ရွှေ့လျှားတဲ့ hoist & trolley arrangement မှာ wheel arrangement ဟာလည်း အရေးကြီးတာမို့၊ upper & lower flange mounting ရွေးချယ်မှုလေးကိုပါဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Image credit to : http://pdf.directindustry.com, http://www.spectechind.com, http://www.emhcranes.com, http://www.ctiautomation.net
Posted by ဒူဒူကြီး at 18:41